Liiska kooxaha heysta saddexda weerar ee ugu xoogan Yurub oo shaaca laga qaaday… (Man United oo ka sarreysa Liverpool) – Gool FM
(Yurub) 18 Jan 2020. Wargeka “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday liiska kooxaha heysta saddexda weerar ee ugu xoogan Yurub, marka loo eego gooldhalinta Yurub ee xilli ciyaareedkan.
Waxaa liiskan saddexda weerar ee ugu xoogan Yurub ee dhanka gooldhalinta hoggaaminaya kaddib qiimeyn la sameeyay saddexda kooxda Paris Saint-Germain, kuwaasoo dhaliyay 51 gool, cel-celis ahaan waxay gool dhaliyeen 83.2 daqiiqo kasta.
Manchester United ayaa liiskan qeyb ka ah, inkastoo ay kaalinta 5-aad kaga jiraan dhanka miiska kala sareynta horyaalka Premier League ee dalka England xilli ciyaareedkan.
Manchester United waxay la wadaageysaa booska kaalinta labaad ee liiskan kooxda Barcelona iyadoo leh 39-gool, waxayna cel-celis ahaan gool dhaliyeen 132.3 daqiiqo kasta, halka weeraryahanada Barca ay gool dhaliyeen 138.6 daqiiqo kasta.
Liverpool ayaa ku jirta kaalinta saddexaad iyagoo leh 38 gool, waxayna heerka cel-celis-ka gooldhalinta ka heystaan 191.6 daqiiqo kasta gool.
Goolasha Paris Saint-Germain waxaa kala dhaliyay saddexda xiddig ee kala ah Kylian Mbappé, Neymar Jr iyo Mauro Icardi, waxayna kala dhaliyeen 21, 13, 17 sida ay u kala horeeyaan.
Halka goolasha Manchester United ay ka dhaliyeen Marcus Rashford, Anthony Martial iyo Mason Greenwood, waxay kala dhaliyeen 19, 11 iyo 9 gool, siday u kala horreeyaan.
Saddexda weerar ee kooxda Barcelona ee ​​goolasha u kala dhaliyay ayaa kala ah Lionel Messi, Luis Suárez iyo Antoine Griezmann, waxayna u kala dhaliyeen 16, 14 iyo 9 gool, siday u kala horreeyaan.
Sadio Mané ayaa ah gooldhaliyaha ugu sareeya ee kooxda Liverpool isagoo leh 15 gool, waxaa ku soo xiga Mohamed Salah oo leh 14 gool, iyo Roberto Firmino oo isna leh 9 gool.